China PVC inonaya prrof jira, PE inonaya machira machira, rori yekuvhara fekitori uye vagadziri | Boda
Jira risinganaye mvura rinoshandiswa zvakanyanya kuvhara zvinhu uye kufamba muminda senge mota, ngarava, mafekitori uye migodhi. Iine hunhu hwekupikiswa nezuva, chando kuramba, kupokana-kukwegura, kurwisa ngura, kurema uremu, kupeta uye kugadzikana.
Chinyorwa: polypropylene kana polyethylene density: 9 × 9 kusvika 14 × 14 upamhi: 1.65m kusvika 12m
Zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi:
Kurema: 60 kusvika 360gsm
Yakapetwa mativi isina mvura, makona mana akapeta kupisa kwekuisa chisimbiso; tambo pamucheto kwekugadziriswa basa, yemotokari dzekuzorora, marori, ngarava, nzvimbo dzekuvaka, huni, asi zvakare kusanganisira marori, matrailer, zvishandiso, ivhu, kununura kwechimbichimbi, kupenda, nezvimwewo Chigadzirwa chine zvakanakira kusavhara mvura, chiratidzo chinotonhora, chezuva, anti-kukwegura, UV nemishonga, mukurumari, kumanikidzwa nemishonga, Kumbofungatira nemishonga, ngura nemishonga, portability, mari uye inoshanda kubatsira. Izvo zvigadzirwa zvinokodzera kuchengetedza, kuvaka, matende akasiyana siyana, majasi eartillery, mafekitori uye mabhizinesi emigodhi, zviteshi zvengarava, mawarves, maturusi akasiyana siyana, mota, ngarava, ndege nedzimwe nzira dzekutakura nekuvhura zvinhu kuvhara uye kuchengetedza.
PVC isina mvura jira chigadzirwa sumo: yakakora turuu tende, inozivikanwawo sePVC matende, akafukidzwa neakakwira simba polyester kanivhasi, yakaputirwa ne polyvinyl chloride (PVC) peta resin, ichiwedzera accelerator, mildew inhibitor, anti-kuchembera mumiririri, anti-static mumiriri uye zvimwe kemikari yokuvirisa, iri plasticized panguva yakakwirira tembiricha. Neisina mvura, chakuvhe chiratidzo, kutonhora kuramba, kukwegura kuramba, anti-static uye zvimwe zvivakwa, inogona kugadziriswa mumhando dzakasiyana uye mamodheru zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi. Kana uchigadziriswa, mativi mana emucheka wemafuta akaputirwa ese, makona mana nemativi mana akasungwa mabhatani, uye maoko ese akasununguka
Hunhu hwePVC inonaya jira uye zvinongedzo zvekutarisa mukushandisa:
1. Iine mashandiro ekudzivirira mvura, kunaya kwemvura, sunscreen, chiratidzo chehuvhu, tensile, kupeta uye mamiriro ekunze, uye ine hunhu hweasidhi uye alkali kuramba, kupisa kwakanyanya kupisa, kushambidza kuri nyore uye kupeta.
2. Ichi chigadzirwa chinofanira kudzivisa unopinza simbi unopinza maturusi ari kushandiswa
Shandisa nekuchengetedza ruzivo rwePVC isina mvura jira:
1. Kana PVC netiraipi ichishandiswa, inofanirwa kudzivirirwa kukwenya jira nemidziyo yakapinza, zvinozopa kudzikira kwekuita kwemvura kwemucheka.
2. Mushure mekushandiswa kwePVP turuu, inofanirwa kuvhurwa, kuomeswa uye kurongedzwa kuti ishandiswe zvakare.
3. Kana maturu ePVC akarongedzwa nekuchengetwa, anofanirwa kuchengetedzwa kubva kuhunyoro nemakonzo. Vanofanira kuomeswa nguva nenguva zvinoenderana nehunyoro hwemuno nemamiriro ekunze.
4. Panguva yekutakurwa kwetende yePVV, simba rinofanira kunge rakawandisa kudzivirira pasuru yekunze kubva mukukuvara uye chivharo chekudzivirira kubva pakubvarurwa nechisimba.
5. Matende ePVC kazhinji haapisi moto, saka anofanirwa kuchengetedzwa kubva panowanikwa moto kana achinge achishandiswa, kunyanya kana achinge achengetwa.
6. Kana iyo tarpaini yePVC yabuditswa, zvinodikanwa kuti zvidzivise kukuvara kweyekuvhara quilt kunokonzerwa nekudhonza pasi.
7. Turuu hwePVC husati hwapetenuka, pasi rinofanira kuongororwa kuti ribvise zvinhu zvakapinza kudzivirira kukuvara kwemachira pamusoro pechidziro chekuputira.
Kazhinji, jira rakagadzirwa nepolypropylene kana polyethylene. Jira remvura imhando yemachira ine mvura chiratidzo chekuita basa.
BOSENDA inopa akateedzana emvura isina jira / mvura chiratidzo chevhavha ine yakazara yakatarwa, kune rumwe ruzivo, inzwa wakasununguka kutibata nesu.
Pashure: Welding muchina, DC Welding muchina, AC Welding muchina, Welded mask, Welding accessories
Zvadaro: Padlock, kutevedzera mhangura yekukiya, isina simbi yekuvhara, shizha rakavhara, anti-kubavha yekukiya, password yekukiya, yeminwe yekukiya uye mamwe makiyi
Pe Mvura Inoratidza Mucheka
PVC Mvura Uchapupu Mucheka
Mvura Inoratidza Mucheka
Jira risina mvura
Welding muchina, DC Welding muchina, AC Welding ...
Teipi yemagetsi, kupisa kutsigira tepi, PV ...
Pisa inonyungudutsa pfuti yeglue, pfuti yemagetsi yesimbi, ...
kuveza roller chinotenderera seti, kuveza broach ...